कांग्रेसको आरोपमा कुनै सत्यता छैन – प्रचण्ड::kamananews
दश बर्षे जनयुद्धबाट शान्तिप्रक्रिया हुँदै दुई पटक सत्ता नेतृत्वमा रहेका दाहालले समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक विकासका आधारमा ‘समृद्ध नेपाल विकशित चितवन’ ३० बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । पुत्र प्रकाशको निधनपछि केही समय चुनाव प्रचारमा सुस्तता आए पनि शुक्रबारदेखि दाहालले चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन् ।
चुनावी सभामै दाहालले चितवनलाई विकासको नमुना र एसियाकै समृद्ध सहरमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दाहालले चितवनको विकासका लागि सात वटा नगरपालिका एकीकरण गरी ‘चितवन मेट्रो सिटी’ बनाउने, पाँच वर्षभित्र ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, भूमिहीन २० हजार सुकुम्बासीका लागि आधुनिक आवास गृह निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुरुङमार्ग वा फ्लाई ओभरमध्ये एक निर्माण गर्ने, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको स्तरोन्नति र सेवालाई व्यवस्थित बनाउने, भरतपुर अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
वाम गठबन्धनलाई लोकतन्त्रविरोधी र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भन्ने आरोप लगाइएको छ यो आरोपप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
शान्तिप्रक्रियाको कट्टर हिमायती र संविधान निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि चुनावमा जाने पार्टी अधिनायकवादी शक्ति हुनै सक्दैन । शान्तिप्रक्रियाका दुई अनुयायीमध्ये एक म भएकोले अधिनायकवाद सोच्न पनि सक्दिनँ । कांग्रेसलगायत दक्षिणपन्थीको आरोपमा कुनै सत्यता छैन । त्यसैले मैले भनिसके एमाले र माओवादीको पार्टी एकीकरणको उद्देश्य राष्ट्र र जनताको आर्थिक समृद्धि नै हो ।
एमालेसँगको चुनावी गठबन्धन र लगत्तै हुने पार्टी एकताका लागि भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन हुन्छ ?
हुन्छ । म र ओली दुवै नेता सहमतिमै कार्यकारी भूमिकामा जान्छौं । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखजस्ता पद आपसी सहमतिमा बाँडफाँट हुनेछ । नेपालको राज्यसत्तामा वामपन्थीको एकमाना सरकार सात दशकदेखिको आम नेपालीको चाहना हो ।
छिमेकीप्रति एकीकृत पार्टीको रणनीति कस्तो हुनेछ ?
उत्तर स् आगामी दिनमा कुनै पनि छिमेकीको स्वार्थमा नेपालमा सत्ता स्वार्थका लागि विभाजन हुँदैन । चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध हुनेछ । नेपालले दुवै छिमेकीबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने आधारमा विदेश नीति तय गरिनेछ ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा भावी परिणामबारे केही बताइदिनु हुन्छ ?
स्पष्टै छ, वामपन्थी गठबन्धनको सानदार जित हुनेछ । आम जनता परिवर्तनपछिको राजनीतिक अस्थिरताबाट वाक्क भइसके । शान्ति, स्थायित्व र सुशासन आम जनताको मागका रूपमा आफूले हेरिरहेको हुँदा वामपन्थीको पक्षमा दुई तिहाइ मत हुने कुरामा आशंका नगरे हुन्छ । यो निर्वाचन परिवर्तनलाई संस्थागत गराउनु रहेको मेरो बुझाइ छ ।
तपाईंका ३० बुँदे चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने आधार र प्रक्रिया के के हुन् ?
स्थानीयमा झैं प्रदेश र केन्द्रमा पनि स्पष्ट दुई तिहाइको मत, परिवर्तन अनकूलको राज्य संयन्त्रको सञ्चालन र ठूला परियोजनाको निरन्तरता नै हो । माओवादी र एमालेले आगामी केही दिनमा सञ्चालन गर्ने राज्य व्यवस्थाले चाँडोभन्दा चाँडो जनताबीच त्यसको सन्देश दिनेछन् ।